Myanmar's No.1 Online Advertisment service for Myanmar Directory,Myanmar buy and sell,Myanmar Jobs,Myanmar Events,Myanmar Estate,Myanmar Car and Online mobile Version
Tianhe-2 Super Computer က ကမ္ဘာ့ အမြန်ဆုံး Super Computer
တရုတ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံက Super Computer တစ်လုံး ဖြစ်တဲ့ Tianhe-2 က ကမ္ဘာ့ အမြန်ဆုံး Super Computer နေရာကို ရယူနိုင် ခဲ့ပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၆) လ အထိ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက Titan Super Computer က ကမ္ဘာ့ အမြန်ဆုံး Super Computer ဖြစ်နေ ခဲ့တာပါ။
Dell Compellent Storage Center 6.3 (Server Review)
Dell ရဲ့ Automated Tiered Storage ဟာ အချက် အလက် များကို သိမ်းဆည်း နိုင်ဖို့နဲ့ Storage Management လုပ်ဖို့ အတွက် ထွက်လို့ လာပါပြီ။
မနေ့ညက ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ကူပါတီနိုမြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ Apple က iPhone 5S ကို ပွဲထုတ်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ iPhone 5S မှာ camera feature တွေ ပိုမိုပါဝင်လာပြီး processor ကိုလည်း အဆင့်မြှင့်ပေးထားပါတယ်။ Top 25 Best Windows 8 Applications (News)
(၂၀၁၃) ခုနှစ် ဇွန်လမှာ ပြုလုပ် ခဲ့တဲ့ Conference မှာ Microsoft ဟာ OS အသစ် ဖြစ်တဲ့ Windows 8.1 ကို ထုတ်လုပ် လိုက်ကြောင်း ကြေညာ ခဲ့ပါတယ်။ အခု လက်ရှိ မှာလည်း Windows 8 ကို Device တွေ အများကြီးမှာ အသုံးပြု နေကြ တာကို တွေ့ရ ပါတယ်။
Microsoft Browser များထဲတွင် Internet Explorer 10 က ဒုတိယ လုံခြုံမှု အရှိဆုံးဖြစ်
Internet Explorer 10 ဟာ Microsoft’s Browser တွေ ထဲမှာ ဒုတိယ လုံခြုံမှု အရှိဆုံး Browser အဖြစ် သတ်မှတ် ခံခဲ့ ရပြီး သုံးစွဲသူ နှုန်းဟာ (၁၆.၅%) ကနေပြီး (၂၄%) အထိ တိုးလာ ခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်လို Tablet မျိုးကို လိုချင်တာပါလဲ (Article)
ယနေ့ခေတ် လူငယ်တွေ အတွက် Tablet တွေဟာ ကျောပိုး အိတ်ထဲ ထည့်ပြီး သွားလေ ရာကို သယ်သွားလို့ အဆင် ပြေတဲ့ Device တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်း နားထောင်၊ ဂိမ်းဆော့လို့ ရတဲ့ အပြင် ကျောင်းစာနဲ့ ပတ်သက် တာတွေ ကိုလည်း သိမ်းထားလို့ အဆင်ပြေ ပါတယ်။
#‎Lenovo‬ Miix 10 ‪#‎Windows‬ 8 ‪#‎Tablet‬ (#Tablet ‪#‎Review‬)
Lenovo က Windows 8 သုံးထားတဲ့ Miix 10 Tablet အသစ်ကို ထုတ်လုပ် လိုက်ပြီ ဖြစ်ပြီး ကြိုတင် အမှာစာ များကို စတင် လက်ခံ နေပါပြီ။ တရားဝင် ဖြန့်ချိမယ့် နေ့ကတော့ သြဂုတ်လ (၁၆) ရက်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ တန်ဖိုးက.....
#‎Sony‬ မှ ‪#‎VAIO‬ ‪#‎Laptop‬ ‪#‎Model‬ အသစ် သုံးမျိုး ထွက်ရှိ (#Laptop ‪#‎Review‬)
Sony က Special-edition Version Laptop အသစ် တွေကို ထုတ်လုပ် လိုက်ပါပြီ။ Model တွေ ကတော့ Fit 15, Pro 13, Duo 13 တို့ ဖြစ်ပြီး အရောင်က Ferrari-red ဖြစ်ပါတယ်။
7-inch ‪#‎Tablet‬ ထုတ်လုပ်သူတွေ 6-inch ‪#‎Smartphones‬ တွေအပြိုင် ဖြစ်လာတာကို ကြောက်ရွံ့ (‪#‎News‬)
Tablet ဈေးကွက်မှာ 7-inch အရွယ် အစား ရှိတဲ့ Tablet တွေကို ထုတ်လုပ် ထားသူ တွေဟာ 6-inch အရွယ် အစား ရှိတဲ့ Smartphone တွေက ဈေးကွက် လုသွား မှာကို စိုးရိမ်နေ ကြရ ပါတယ်။
Glammy Me Ladies Fashion
Glammy Me Ladies Fashion Store မှ ခေတ်မီအမျိုးသမီးအဝတ်အထည်များကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာရောင်းချပေးနေပါသည်။
Junction Cineplex is one of Myanmar's leading multiplex cinema exhibitors. Junction Cineplex brand started offering services since 2009 at the capital city of Myanmar, Naypyitaw.
Always ready for the smart traveller
Golden Myanmar Airlines is the first Myanmar Aviation Public Company established in July 2012
MAI International Airline of Myanmar
Myanmar Airways International - A Brief History
More Recent Development 2001-2003 LEISURE TRAVEL & TOURS CO.,LTD
အမှတ်(၈၁၊ဘီ)၊ ခိုင်ရွှေဝါ၊ ဗဟိုလမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်။
ဖုန်းနံပါတ် : ၀၁-၅၃၂၁၆၈၊ ၀၉-၄၅၀၀ ၄၈၃၇၉၊ ၀၉-၄၅၀၀ ၆၅၉၂၃။
Myanmar TV & Electronic Pte Ltd
Giordano International was founded in Hong Kong in 1981 and is now one of the worlds leading international retailers of apparel and accessories 7Days Travel & Tour Co.Ltd
7Days Travel & Tour Co., Ltd is the one of the biggest travel company in MYANMAR. 7Days is here to help you plan your Myanmar holiday package.
Sedona Hotel Yangon, YG
One of the top yangon hotel and awarded by Asia's Best Hotels & Resort 2002
Samsung Galaxy note 1(original note) cover
ဇီးကွက်ပုံပါ နှစ်ထပ်ပုံစံ ဂါဝန် (D0005/C3)
ချစ်စရာ အပွင့်ဒီဇိုင်းနဲ့ဇာဆွဲသားတီရှပ် (T0017)
***ရောင်းမည်*** လိပ်ပြာပုံ အပေါ်ဝတ်သိုးမွှေးအင်္ကျီ(T0014)
နှစ်ထပ်ပုံစံ ကိုရီးယားဒီဇိုင်း ဘလောက်စ် (T0009/C3)
TTX YAMAHA Auto ရောင်းမည်
မိုင်အရေအတွက်: 30,000ဈေးနှန်း: K 17,500,000
မိုင်အရေအတွက်: 80,000ဈေးနှန်း: K 14,300,000
မိုင်အရေအတွက်: 10ဈေးနှန်း: K 14,000,000
မိုင်အရေအတွက်: 13,500ဈေးနှန်း: K 16,500,000
2008 TOYOTA BELTA G 2008 Toyota Belta
Assistant Manager (Business Development )ကျား/မ (၁) ဦး
Assistant Manager (Marketing )ကျား/မ (၁) ဦး yangon, YG11/9/2013
တိုက်ခန်း : ရောင်းရန်
For Sale2 အိပ်ခန်း 1.0 ရေချိုခန်းK 45,000,000
အဖွင့်စာမျက်နှာ ဓာတ်ပုံကဏ္ဏ (အားလုံးကြည့်ရန်)
Copyright © 2013 EazyLink All Rights Reserved.